निर्वाचनमा जानु परेतापनि भोट नेकपालाई नै दिनुपर्छ « Etajakhabar
निर्वाचनमा जानु परेतापनि भोट नेकपालाई नै दिनुपर्छ
काठमाण्डौ । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ६ महिनाभित्र पार्टी एकता गराइसक्ने दाबीसहित एकताको राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गरेका छन् । बुधबार उपाध्यक्ष गौतमले अभियानको औपचारिक रुपमै घोषणा गरेका हुन् । पार्टी विभाजनको पक्षमा कोही नभएको भन्दै शक्ति निर्माण गरेर दुई पार्टीलाई एक बनाइछाड्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
शीर्ष नेताहरु विभाजित भए पनि पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरु एकता भंग भएकोमा चिन्तित रहेको भन्दै गौतमले उनीहरुलाई संयोजन गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘पार्टी पुनः एकीकरणको हाम्रो अभियान अहिले दुई चरणको हुनेछ । पहिलो चरण सर्वोच्चको निर्णय अनाउँदासम्मको, दोस्रो चरण अदालतको निर्णयपछि’ उनले जारी गरेको अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा जस्तो फैसला गर्नेछ त्यो आफूहरुलाई मान्य हुने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पार्टी एकता जोगाउन सकिने भएकोले आफ्नो भित्री धारणा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेको बताए । ‘मेरो भित्री चाहना प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नै हो,’ गौतमले भने, ‘तर सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्नुपर्छ । सर्वोच्चले निर्वाचन भन्यो भने निर्वाचनमा जानुपर्छ तर भोट नेकपालाई नै दिनुपर्छ ।’
उपाध्यक्ष गौतमले नेकपालाई विभाजन गर्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको बराबरी भूमिका रहेको धारणा राखे । पार्टी एकताको महत्वपूर्ण आधार नै आलोपालो भएको भन्दै गौतमले २०७५ मंसिर ४ गते अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारी भूमिका दिएपछि पार्टी एकता गर्दाको सहमतिअनुसार आलोपालो प्रधानमन्त्री दाहालले छाड्नु नै पार्टी विभाजनको सुरुवात भएको बताए ।
‘अहिले उहाँहरु दुईतिर फर्कनु भएको छ, दुईतिर फर्किएकालाई मैले एकैतिर फर्काइदिन्छु । केपी ओली कहिल्यै एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन । प्रचण्डजी म नहुँदा हो नभए जहिल्यै एकताको पक्षमा हो । म एकातिर जान्छु र केपीलाई प्रचण्डतिर फर्काइदिन्छु र प्रचण्डलाई केपीतिर फर्काइदिन्छु, त्यो तागत मसँग छ,’ गौतमले भने । उपाध्यक्ष गौतमले अर्को पार्टी बनाउँछन् भन्ने सन्देश गएको भन्दै आफूहरुले अर्को पार्टी नबनाएको स्पष्ट पारे ।
यी हुन् सार्वजनिक रूपमै माझीऔंला देखाउने सेलिब्रेटी
मुम्बई । बलिउडमा यस्ता केही सेलिब्रेटी छन्, जसले आफ्नो रिस सार्वजनिक रूपमै ‘माझीऔंला’ देखाएर प्रकट
भक्तपुरमा आँगनमा लगाएको १२ फिट अग्लो पर्खाल भत्कियो,बाटोमा हिँड्दै गरेकी नारायणदेवीले घटनास्थलमै गुमाइन ज्यान
भक्तपुर : सूर्यविनायक नगरपालिका–१० चित्तपोल लाकुरीस्थित कान्छा श्रेष्ठको घरआँगनमा लगाएको १२ फिट अग्लो पर्खाल भत्किएर
इजरायल जान चाहानेहरुका लागि आयो खुशीको खबर, यसरी जान सकिन्छ कामदारका रुपमा इजरायल
काठमाडौं : इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध ट्रेड युनियन आन्दोलनका कारण रोकिएको इजरायलको रोजगारी ६ महिनापछि
इजरायल जान चाहानेहरुका लागि आयो खुशीको खबर, इजरायल रोजगारी खुल्यो, कसरी जाने ? के हो प्रक्रिया ?
चितवनमा यस्तो हर्कत गरेर भागेका ६ जनालाई फिल्मी शैलिमा समात्यो प्रहरीले
१ महिना कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएपछि फरार रहेकी चितवनकी बबिता फिल्मी शैलिमा समातिइन